Ukuchaza kwakhona i-Geo-Engineering Concept -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Ukuchaza kwakhona uMxholo we-Geo -unjineli
Siphila umzuzu okhethekileyo kwindibano yoqeqesho iminyaka sele yahlulwe. Uphando, uyilo loyilo, ukuzoba umgca, uyilo lolwakhiwo, uyilo, ulwakhiwo, ukuthengisa. Ukwenza umzekelo wento ebihamba ngesiqhelo; Linear yeeprojekthi ezilula, ukuphindaphinda kwaye kunzima ukulawula kuxhomekeke kubungakanani beeprojekthi.
Namhlanje, ngokumangalisayo, sidibanise ukuhamba phakathi kwezi nkalo, ngaphaya kwetekhnoloji yolawulo lwedatha, zabelana ngeenkqubo. Into yokuba kunzima ukuchonga apho umsebenzi womnye uphela khona kwaye omnye uqala; Apho ukuhanjiswa kolwazi kuphela, xa uhlobo lweemodeli lusifa, xa iprojekthi iza kuyekiswa.
Ubunjineli be-Geo: sifuna ikota entsha.
Ukuba ibizokubhaptiza eli nqanaba leenkqubo, ezisuka ekubambeni ulwazi oluyimfuneko leprojekthi kwimeko yobume bendalo ukuyifaka ekusebenzeni ukulungiselela oko ibicacisiwe, siya kuba nesibindi sokuyibiza Geo-yobunjineli. Nangona eli gama belikho kweminye imixholo enxulunyaniswa nesayensi ethile yomhlaba, ngokuqinisekileyo asikho kumaxesha okuhlonipha imihlangano; ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba indawo ye-geo iye yaba sisithako sangaphakathi kuwo onke amashishini, kwaye umbono we Amanqanaba e-BIM Kuyasinyanzela ukuba sicinge ukuba umda woYilo, ubuNjineli kunye noKwakha (i-AEC) ungasilela xa sijonga umda wenyathelo elilandelayo, eliyi-Operation. Ukucinga kwindawo ebanzi kufuna ukuthathela ingqalelo impembelelo yangoku yenkqubo yokwenza ikhompyutha, edlula kulwakhiwo lwezixhobo kunye nokwanda kumashishini angahlali emelwe ngokwasemzimbeni, angadibaniselwanga kuphela phakathi Ukusebenza kwedatha ngokulandelelana kodwa ngokudibeneyo kunye nokuphindaphindeka kokudityaniswa kweenkqubo.
Ngolu shicilelo Kwimagazini samkele igama elithi Geo -unjineli.
Ubungakanani bengqondo ye-Geo-engineering.
Ixesha elide, iiprojekthi zibonwe ngokwamanqanaba ahlukeneyo njengeziphelo eziphakathi ngokwazo. Namhlanje, siphila kumzuzwana apho, kwelinye icala, ulwazi luyimali yotshintshiselwano ukusuka ekubanjweni kwayo ukuya kwindawo yokulahla; Kodwa ukusebenza ngokukuko kuyancedisana nomxholo ukuguqula ukubakho kwedatha kwi-asethi ekwaziyo ukuvelisa ukusebenza ngakumbi kunye neephothifoliyo xa zijongana neemfuno zentengiso.
Sithetha ke ngetekhonkco eliqulathwe ngawona mabali aphambili ongeze ixabiso kwizenzo zomntu kwi-macroprocess leyo, ngaphaya kokuba yinto yeenjineli, yinto yabantu abashishini.
Inkqubo yenkqubo - Ipateni leyo -kudala-Ukutshintsha esikwenzayo.
Ukuba siza kuthetha ngeenkqubo, kuya kufuneka sithethe malunga nexabiso lentengo, senziwe lula ngokuxhomekeka kumsebenzisi wokugqibela, wezinto ezintsha kunye nokukhangela ukusebenza kakuhle ukwenza utyalomali lube nengeniso.
Inkqubo esekwe kulawulo loLwazi. Ininzi yemizamo yokuqala kwiminyaka yee-90, kunye nokufika kwekhompyutha, kwakuza kuba nokulawula kakuhle ulwazi. Kwelinye icala, ifuna ukunciphisa ukusetyenziswa kweefomathi ezibonakalayo kunye nokusetyenziswa kwezibonelelo zokubala kubalo oluntsonkothileyo; Ngenxa yoko, i-CAD ekuqaleni ayitshintshi iinkqubo kodwa ibakhokelela kulawulo lwedijithali; qhubeka usenza phantse into enye, enolwazi olufanayo, usebenzisa inyani yokuba amajelo eendaba anokuphinda asetyenziswe. Umyalelo we-offset uthatha indawo yomgaqo ofanayo, i-ortho-snap isikwere se-3 degree, isangqa ikhampasi, ukunciphisa itemplate yokususa ngqo njalo njalo ngokulandelelana senze ukutsiba ngokunyanisekileyo kwakungekho lula okanye kuncinci, ucinga nje Uncedo lokwahlulahlula ngelinye ixesha kuya kuthetha ukulandelelwa kwesicwangciso sokwakha ukuze sisebenze kwizicwangciso zolwakhiwo okanye zokucwangciswa kwemibhobho yamanzi. Kodwa kwafika umzuzu xa i-CAD ifezekisa injongo yayo kumanqanaba amabini; kuye kwadinisa ngokukodwa kumacandelo eminqamlezo, ii-facade kunye nemiboniso-mbono-ntathu; Le yindlela yokwenza imodeli ye-2D ngaphambi kokuba siyibize ngokuba yi-BIM, ukwenza lula ezi ndlela kunye nokutshintsha okuninzi kwinto esiyenzileyo kwi-XNUMXD CAD.
... ngokuqinisekileyo, ukuphathwa kwe-3D ngexesha lokugqibela ekuhanjisweni kwe-tuli kwafikelelwa ngokunyamezela kwezixhobo ezinqongopheleyo zezixhobo kwaye zingabi yimibala eqaqambileyo.
Ababoneleli abakhulu be-software kumzi-mveliso we-AEC babetshintsha ukusebenza kwabo ngokufanelekileyo ngezi zinto zibalulekileyo, ezinento yokwenza nobuchule behardware kunye nokwamkelwa ngabasebenzisi. Kude kufike ixesha apho olu lawulo lolwazi belungonelanga, ngaphaya kokuthunyelwa kweefomathi, ukunxibelelana kwedatha eyintloko kunye nokudityaniswa okungafaniyo okwachaphazeleka kuloo meko yembali yomsebenzi isekwe kumasebe.
Imbali encinci. Nangona kwicandelo lobunjineli bemizi-mveliso ukukhangela ukusebenza okunembali kuninzi ngakumbi, ukwamkelwa kwetekhnoloji yoLawulo lweMisebenzi kumxholo we-AEC kwakusemva kwaye kusekwe kwizidibanisi; Inqaku namhlanje kunzima ukulijonga ngaphandle kokuba sithathe inxaxheba kuloo mathuba. Amanyathelo amaninzi avela kwiminyaka engamashumi asixhenxe, bafumana amandla kumashumi asibhozo ngokufika kwekhompyuter yakho ethi, ekwaziyo ukuba kuyo yonke idesika, yongeza kuyilo oluncediswa yikhompyuter olunokubakho kolwazi, imifanekiso engxamisekileyo, uthungelwano lwangaphakathi lwe-LAN kunye nokubanakho ukudibanisa uqeqesho olunxulumene noko. Nazi izisombululo ezithe nkqo zamaqhekeza wepuzzle afana nophando, uyilo loyilo, uyilo lolwakhiwo, uqikelelo lohlahlo-lwabiwo mali, ulawulo lwempahla, ucwangciso lokwakha; konke kusikelwe umda kubuchwephesha obungonelanga kumdibaniso osebenzayo. Ukongeza, imigangatho phantse yayingekho, ababoneleli besisombululo bahlupheka kwiifomathi zokugcina ezingalunganga kwaye, ewe, ukumelana notshintsho ngomzi mveliso ngenxa yokuba iindleko zokwamkelwa kwaba nzima ukuzithengisa ngokunxulumene nokusebenza kunye Ukusebenza kwexabiso.
Ukuhamba kweli nqanaba lokuqala lokwabelana ngolwazi kufuna izinto ezintsha. Mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo ibikukukhula kwe-Intanethi, okuthi, ngaphaya kokusinika ithuba lokuthumela ii-imeyile kunye nokubrawuza amaphepha ewebhu amileyo, avule umnyango wentsebenziswano. Uluntu olunxibelelana ngexesha lewebhu le-2.0 lityhalelwe ukubekwa emgangathweni, ngokungaqhelekanga ivela kumalinge Vula Umnikezi ukuba okwangoku azisavakali zingenantlonelo kwaye zibonakala ngamehlo amatsha kumzi mveliso wabucala. Uqeqesho lwe-GIS lwalungomnye wemizekelo ebalaseleyo, eza ngokuchasene nazo zonke iingxaki kumaxesha amaninzi ukoyisa isoftware yobunini; Ityala ukuza kuthi ga ngoku alikhange lilandelwe kwishishini le-CAD-BIM. Izinto kuye kwafuneka ziwe ngokobunzima bazo ngaphambi kokuvuthwa kwengcinga kwaye ngokungathandabuzekiyo utshintsho kwimakethi yeshishini le-B2B kwipetroli yelizwe jikelele esekwe kunxibelelwano.
Izolo sivale amehlo ethu kwaye namhlanje sivuke sibona ukuba imeko yangaphakathi enje nge-geo-ndawo sele ikho kwaye ngenxa yoko ayitshintshi kwimveliso yedijithali, kodwa inguqu engenakufikelelwa yoyilo kunye nentengiso yemarike.
Iinkqubo ezisekwe kuLawulo lokuSebenza. Inkqubo yenkqubo isikhokelela ekwaphuleni iiparadigms zokwahlulwa kwamacandelo ngendlela yesebe yokwenza iiofisi ezahlukeneyo. Amaqela oPhando afike ekubonakaliseni nasekusebenziseni ikhompyuter, iidrafti zisuka kwiidrowa ezilula zalatha iimodeli; iinjineli kunye neenjineli zeza kulawula imboni ye-geospatial ebonelela ngedatha ngakumbi enkosi kwindawo ye-geo. Oku kutshintshe ukugxila ekuhanjisweni okuncinci kweefayile zolwazi ukuya kwiinkqubo apho izinto zokumodareyitha zizinto nje zefayile ezondliweyo phakathi koqeqesho lophando, ubunjineli bobugcisa, uyilo, ubunjineli bemizi-mveliso, ukuthengisa kunye nejometri.
Imodeli Ukucinga ngeemodeli kwakungelula, kodwa kwenzeka. Namhlanje akukho nzima ukuqonda ukuba umhlaba, ibhulorho, isakhiwo, umzi mveliso okanye uloliwe ziyafana. Into ezelwe, ikhule, ivelise iziphumo kwaye iya kufa ngenye imini.
I-BIM yeyona nto ingcono yexesha elide ekhe yanayo imboni yobunjineli ye-Geo. Mhlawumbi elona galelo lakhe likhulu kwindlela yokumiselwa komgangatho njengebhalansi phakathi kokungathintelwa kokuyilwa kwecandelo labucala kwicandelo lobuchwepheshe kunye nemfuno yezisombululo ezifunwa ngumsebenzisi ziinkampani zabucala nezikarhulumente ukunikezela ngeenkonzo ezingcono okanye ukuvelisa iziphumo ezingcono ngezixhobo ezibonelelwa ishishini. Ukuqikelelwa kwe-BIM, nangona kubonwe ngendlela encinci ngabaninzi kwisicelo sayo kulwakhiwo lomzimba, ngokuqinisekileyo inendawo enkulu xa sicinga ukuba ii-BIM hubs zikhulelwe kumanqanaba aphezulu, apho ukudityaniswa kweenkqubo zobomi bokwenyani kubandakanya uqeqesho ezinje ngemfundo, ezemali, ezokhuseleko, phakathi kwezinye.
Ukhetho lwexabiso Ixabiso-ukusuka kulwazi ukuya ekusebenzeni.
Namhlanje, izisombululo azijolise ekuphenduleni kuqeqesho oluthile. Izixhobo ezenziweyo zodwa kwimisebenzi enje nge-toposurface modelling okanye uhlahlo-lwabiwo mali zinciphise isibheno ukuba azinakho ukudityaniswa nokunyuka, ukuhla, okanye ukuhamba ngokuhambelana. Esi sizathu esenza ukuba iinkampani ezikhokelayo kolu shishino zibonelele ngezisombululo ezizisombulula ngokupheleleyo iimfuno zalo lonke uluhlu lwazo, kwikhonkco elinamaxabiso ekunzima ukulenza.
Olu xokelelwano lubunjwe ngezigaba ezenza ngokuthe ngcembe ukuphumeza iinjongo zokuhambelana, ukophula ukulandelelana kunye nokukhuthaza ukufana kokusebenza ngexesha, iindleko kunye nokulandelela; Izinto ezingathintelekiyo zeemodeli ezisemgangathweni zangoku.
Ingqondo yobunjineli ye-Geo iphakamisa ulandelelwano lwezigaba, ukusuka ekukhulelweni kwemodeli yeshishini kude kube kuveliswe iziphumo ezilindelekileyo. Kwezi zigaba zahlukeneyo, izinto eziphambili ngokubaluleka kulawulo lolwazi ziyehla ngokuthe ngcembe kude kube lulawulo lomsebenzi; kwaye kwinqanaba apho izinto ezintsha zisebenzisa izixhobo ezitsha kunokwenzeka ukuba kube lula ukwenza amanyathelo angasongezi ixabiso. Njengomzekelo:
Ukuprintwa kwezicwangciso kuyayeka ukubaluleka ukusuka kwixesha lokuba babonwe ngesixhobo esisebenzayo, njengethebhulethi okanye ihololens.
Ukuchongwa kwemihlaba enxulumene nomhlaba kwimephu yokuma komhlaba yenqanaba akusekho okongeza ixabiso kwiimodeli ezingasayi kuprintwa kwisilinganiselo, eziya kuhlala zitshintsha kwaye zifuna igama elingahambelani neempawu ezingezizo ezomzimba ezinje ngemeko yasezidolophini / yasemaphandleni okanye eyomhlaba. kwingingqi yolawulo.
Kule ndlela idibeneyo, kuxa umsebenzisi echonga ixabiso lokukwazi ukusebenzisa izixhobo zakhe zokuhlola hayi kuphela ukufaka idatha ebaleni, kodwa ukumodareyitha ngaphambi kokufika eofisini, eqonda ukuba ligalelo elilula ukuba kwiintsuku kamva azokufumana ezinxulumene uyilo oya kuthi uphinde ucinge ngalo lwakhiwo. Indawo apho isiphumo somhlaba sigcinwe khona siyeke ukongeza ixabiso, ukuba nje iyafumaneka xa ifuneka kunye nolawulo lwayo lokuguqulela; Ke, ulungelelwaniso lwe-xyz olufakwe ebaleni yinto enye yelifu elinqabileyo elayeka ukuba yimveliso laza laba ligalelo, elinye igalelo, imveliso yokugqibela ebonakala ngakumbi kwityathanga. Kungenxa yoko le nto icebo elinemigca yentsontelo lingasashicilelwa, kuba alongezi ixabiso ngokuthabathela kwimveliso ukuya kwigalelo lomfuziselo wengqikelelo yesakhiwo, nelinye igalelo kwimodeli yoyilo, eya kuba nemodeli yolwakhiwo, a Imodeli ye-elektroniki, imodeli yocwangciso lokwakha. Konke, njengoluhlobo lwamawele edijithali aya kuthi aphele kwimodeli yokusebenza kwesakhiwo esele sakhiwe; oko umthengi kunye nabatyali-mali bakhe bebekulindele ekuqaleni kokuqonda kwayo.
Igalelo lekhonkco likwixabiso elongeziweyo kwimodeli yokuqala yokuqonda, kwizigaba ezahlukeneyo ukusuka ekubanjweni, kwimodeli, kuyilo, kulwakhiwo kwaye ekugqibeleni ulawulo lwe-asethi yokugqibela. Izigaba ezinganyanzelekanga ukuba zibekho emgceni, kwaye apho ishishini le-AEC (uLwakhiwo, uBunjineli, uKwakha) lifuna unxibelelwano phakathi komzekelo wezinto ezibonakalayo ezinje ngomhlaba okanye ulwakhiwo kunye nezinto ezingezizo ezomzimba; abantu, amashishini, kunye nobhaliso lwemihla ngemihla, ulawulo, intengiso, kunye nolwalamano lokwenyani lweasethi.
Ulawulo loLwazi + uLawulo lokuSebenza. Inkqubo yokuyila ngokutsha ayinakuphepheka.
Iqondo lokuvuthwa kunye nokuhlangana phakathi kwemodeli yolwazi lokwakha (i-BIM) kunye noMjikelezo woLawulo lweMveliso (i-PLM), jonga imeko entsha, ebunjwe kwiSine sokuVuselela iMveliso (i-4IR).
IoT - 4iR - 5G - izixeko zeSmart-iTwin yedijithali - i-VR - iBlockchain.
Iziphumo ezintsha zemigaqo yokuqhagamshelwa kwe-BIM + PLM.
Namhlanje kuninzi kwamanyathelo okubangela amagama ekufuneka siwafundile yonke imihla, isiphumo somsitho weBIM + we-PLM osondeleyo. La magama abandakanya i-Intanethi yeZinto (i-IoT), iiSmart Cities (iiSmart Cities), amaDijithali amawele (amaDijithali amaDijithali), i-5G, iArtificial Intelligence (AI), iAugmented Reality (AR), ukubala nje ezimbalwa. Akuthandabuzeki ukuba zingaphi ezi zinto ziya kunyamalala njengee-clichés ezingonelanga, becinga ngokwembono yoko kulindelweyo kwaye babeke ecaleni igagasi lokwexeshana kwiifilimu ezithunyelwe ngasemva ezinikezela ngemizobo yokuba inokuba nkulu kangakanani ... kwaye ngokutsho kweHollywood, phantse yonke intlekele.
Ubunjineli beGeo. Umxholo osekwe kwiinkqubo zolawulo lokuma kwimeko.
I-infographic iveza umbono wehlabathi obonakalayo okwangoku okwangoku awunalo ixesha elithile, ngokwembono yethu esiyibiza ngokuba yiGeo-Engineering. Oku phakathi kwezinye kusetyenziswe njenge-hashtag yethutyana kwimicimbi yeenkampani eziphambili kushishino, kodwa njengoko intshayelelo yethu isitsho, khange ibe negama elifanelekileyo.
Le infographic izama ukubonisa into enyanisekileyo ekungekho lula ukuyibamba, kungasathethwa kangako ngayo. Ukuba sijonga izinto eziphambili ngokubaluleka kumashishini ahlukeneyo anqamlezileyo kumjikelo wonke, nangona kukho iindlela zokuvavanya ezahlukeneyo. Ngale ndlela, sinokuchonga ukuba, nangona imodeli ingumbono oqhelekileyo, sinokujonga ukuba ukwamkelwa kwayo kuye kwalandela olu luhlu lulandelayo:
Ukuphakanyiswa kweGeospatial-Ukhuliso lweCAD -Imodeli ye-3D-Ukuqatshelwa kwe-BIM-Amawele edijithali Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona - Ukudityaniswa kweSmart City.
Ukusuka kwi-optics yokubonelela nge-scope, sibona ukulindelwa kwabasebenzisi ngokuthe ngcembe kusondela kwinyani, ubuncinci kwizithembiso ngolu hlobo lulandelayo:
1D - Ulawulo lwefayile kwifomathi yedijithali,
2D -Ukwamkelwa koyilo lwedijithali lutshintsha isicwangciso esishicilelweyo,
3D -Imodeli enamacala amathathu kunye ne-geo-world's world,
4D -Inguqulo-mlando yohlobo ngendlela yolawulo lwexesha,
5D -Ukungeniswa komba wezoqoqosho kwiindleko ezinokuvela zezinto ezikhoyo,
6D -Ulawulo lomjikelo wobomi bezinto eziguquliweyo, ezihlanganisiweyo ekusebenzeni kwemeko yazo ngexesha lokwenyani.
Ngaphandle kwamathandabuzo, kuqikelelo lwangaphambili, kukho iimbono ezahlukeneyo, ngakumbi kuba ukusetyenziswa kwemodeli kuyanda kwaye ayikhethi. Umbono ophakanyisiweyo yenye yeendlela zokutolika ngokwembono yezibonelelo eziye zabonwa ngabasebenzisi njengoko samkele uphuhliso lwetekhnoloji kushishino; mayibe yile yobunjineli boLuntu, i-Architecture, i-Industrial Engineering, i-Cadastre, iCartography ... okanye ukuqokelelwa kwazo zonke ezi zinto kwinkqubo edibeneyo.
Okokugqibela, i-infographic ibonisa igalelo elenziswe ngoqeqesho kumgangatho kunye nokwamkelwa kwedijithali kwinkqubo yemihla ngemihla yomntu.
I-GIS-CAD-BIM-iTwin yedijithali - izixeko eziSmart
Ngandlela thile, la magama abeka phambili kwiinzame zokuyila izinto ezintsha ezikhokelwa ngabantu, iinkampani, oorhulumente kwaye ngaphezulu kwazo zonke izifundiswa ezikhokelele kwinto esiyibonayo ngoku ngokuvuthwa ngokupheleleyo okunje ngeeGeographic Information Systems (GIS), igalelo ebelimele Uyilo oluNcedisiweyo lweKhompyuter (i-CAD), ngoku iguqukela kwi-BIM nangona, inemiceli mngeni emibini ngenxa yokwamkelwa kwemigangatho kodwa ngendlela echazwe ngokucacileyo kumanqanaba ama-5 okukhula (Amanqanaba e-BIM).
Olunye utyekelo kwimbonakalo yobunjineli be-Geo okwangoku iphantsi koxinzelelo lokubeka ii-Twins zedijithali kunye nezixeko ze-Smart Cities; eyokuqala ngakumbi njengamandla okukhawulezisa ukwenziwa kwamanani phantsi kwenkqubo yokwamkelwa kwemigangatho yokusebenza; okwesibini njengemeko efanelekileyo yesicelo. IziXeko zeSmart zandisa umbono kwiinkalo ezininzi ezinokudityaniswa kumbono wokuba imisebenzi yabantu kufuneka ibe njani kwimeko yendalo, ukulawula izinto ezinje ngamanzi, amandla, ucoceko, ukutya, ukuhamba, inkcubeko, ukuhlala kunye, iziseko kunye noqoqosho.
Impembelelo kubanikezeli bezisombululo kubalulekile, kwimeko yeshishini le-AEC, isoftware, izixhobo zekhompyutha kunye nabanikezeli beenkonzo kufuneka balandele imakethi yomsebenzisi elindele okungaphezulu kuneemephu ezipeyintiweyo kunye nokunikezelwa kwamehlo. Idabi lijikeleze ikona phakathi kweengxilimbela ezinjengeHexagon, iTrimple eneemodeli ezifanayo ezivela kwiimarike abazifumene kule minyaka idlulileyo; I-AutoDesk + Esri ifuna isitshixo somlingo esidibanisa amacandelo ayo amakhulu omsebenzisi, iBentley ngesikimu sayo esiphazamisayo esibandakanya ubudlelwane obudibeneyo ne-Nokia, iMicrosoft kunye neTopcon.
Ngeli xesha imigaqo yomdlalo yahlukile; Ayizisunguli izisombululo zabaphengululi, iinjineli zoluntu okanye abakhi bezakhiwo. Abasebenzisi banamhlanje balindele izisombululo ezibanzi, ezijolise kwiinkqubo hayi kwiifayile zolwazi; ngenkululeko ethe kratya yohlengahlengiso olwenzelwe wena, kunye neeapps ezinokuphinda zisetyenziselwe ukuhamba, ukusebenzisana kunye nangaphezulu kwayo yonke imodeli efanayo exhasa ukudityaniswa kweeprojekthi ezahlukeneyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo siphila umzuzu omkhulu. Isizukulwana esitsha asizukufumana ilungelo lokubona ukuzalwa kunye nokuvalwa komjikelo kule ndawo ye-Geo-engineering. Ngeke uyazi ukuba kwakumnandi kangakanani ukusebenzisa i-AutoCAD kwi-80-286-umsebenzi omnye, umonde wokulinda ukubonakala kwesicwangciso sokwakha, kunye nokuzithemba ngokungakwazi ukuqhuba iLotus 123 apho sineeyunithi zeendleko isikrini esimnyama kunye noonobumba abaorenji. Abayi kuba nakho ukwazi i-adrenaline yokubona okokuqala imephu ye-cadastral izingelwa kwi-raster kanambambili eMicrostation, isebenza kwi-Intergraph VAX. Ngokuqinisekileyo, hayi, ngekhe.
Ngaphandle kokumangaliswa okukhulu baya kubona ezinye izinto ezininzi. Ukuvavanya enye yeeprototypes zokuqala zeHololens eAmsterdam kwiminyaka embalwa eyadlulayo, kubuyise inxenye yolo luvo kukudibana kwam okokuqala namaqonga e-CAD. Ngokuqinisekileyo asiwunaki umda wokuba olu tshintsho lwesine lweshishini luya kuba nalo, kude kube ngoku sibona izimvo, izinto ezintsha kuthi kodwa zindala ngaphambi kokuba oko kuya kuthetha ukuziqhelanisa nendawo entsha apho ukukwazi ukungafundi kuya kuba kubaluleke ngakumbi kuneedigri zemfundo kunye neminyaka kumava.
Yintoni eqinisekileyo ukuba iza kufika kwangaphambi kokuba silindele.
Novedades de la Geo-Ingeniería - Year In Infraestructure – YII2019